Fitaterana an-dranomasina - Wikipedia
Sambo miantsona eo an-tseranan-tsambo
Ny fitaterana an-dranomasina dia endrika isehoan' ny fitaterana izay tanterahina amin' ny fitaovam-pitaterana afaka mivoivoy eny an-dranomasina na an-dranomasimbe. Io no karazam-pitaterana io no misahana ny ankabeazan' ny fitaterana ny entam-barotra. Isan' ny fitaovam-pitaterana an-dranomasina ny lakana sy ny botry ary ny sambo.
Efa tsy be mpanao ankehitriny ny ftaterana olona an-dranomasina noho ny fandrosoan' ny fitaterana an' habakabaka. Tsy misy tavela amin' izany raha tsy ao amin' ny sehatra roa, dia ny fiampitana fohy sy ny fitsangantsanganana an-dranomasina. Manampy izany ny fandehanan-davitra anaovana fikarohana ara-tsiasa na anaovana fanatanjahan-tena, izay tsy tena mahakasika ny atao hoe fitaterana.
Ny sehatra iraisam-pirenena no tena ampiasana ny fitaterana an-dranomasina, nefa fahita ihany koa ny fitaterana an-dranomasina mampifandray toerana roa na maro ao amin' ny morontsiraky ny firenena iray na eo anelanelan' ny tangoro-nosin' ny firenena iray na amin' ny tany lehibe sy ny nosy iray na maro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitaterana_an-dranomasina&oldid=1000437"
Voaova farany tamin'ny 16 Janoary 2021 amin'ny 04:02 ity pejy ity.